Ngwa ndị na -adigide Spanish na vegan nhicha | Bezzia
Ngwa ndị na -adigide Spanish na vegan nhicha
Maria onyekwere | 11/09/2021 10:00 | Home
Na Bezzia anyị na -agba gị ume mgbe niile ka ị jiri ngwọta nhicha na -adigide. Ịtụkwasị obi na ihe na -emebi emebi na nje antibacterial nke mmanya ọcha ma ọ bụ lemon na ike nke bicarbonate iji wepụ ma wepu isi na -adịghị mma, n'etiti ndị ọzọ. Na nkenke, imepụta ngwaahịa nhicha nke gị zere nkwakọ ngwaahịa plastik na -egbu egbu na nke na -adịghị mkpa.
Agbanyeghị, anyị maara na ọ bụghị unu niile chọrọ ịmalite ịnwale na ịhazi usoro dị iche iche. Ma ọ bụ ya mere taa anyị ji ekerịta gị ụfọdụ Ngwa ndị na -adigide Spanish na vegan nhicha. Zuru oke maka ịchekwa nkwakọ ngwaahịa, oghere na ego.
1 Enwe obi ụtọ & Emela
3 Bugharịa & saa
Enwe obi ụtọ & Emela
Dicha & Hecho na-enye gị ihe nhicha gburugburu ebe obibi, ihe nhicha ụlọ, akwa na ụlọ ịsa ahụ dị n'ụdị mmiri, juru n'ime katọn emegharịrị. N'etiti ọtụtụ ngwaahịa ya, taa anyị na -ele ya anya Ngwọta "Multi-surface and Window Cleaner" ngwọta maka ike ya ịsachapụ ihe niile dị n'ime ụlọ.
Ngwọta nhicha a nwere akara Ecolabel European na -echere ka ọ dị irè maka ihicha ụdị ihu niile na -ahapụghị streaks. Ha pods mmiri na-agbaze nke ọma Ha na -ezere ihe mkpofu ma na -etinye ya na obere igbe kaadiboodu 90% emegharịrị na 10% sitere n'oké ọhịa jisiri ike na ịdị nso, ọkachasị na North Spain.
Iji ya dị mfe. Tinye otu ọgwụ Bliss & mere na ịgba, gbakwunye mmiri ọkụ, maa jijiji, ị ga -enwekwa Multisurface na Cleaner Window dị njikere iji. Ihe ịgba nke ị nwekwara ike ịzụta na Dicha & Hecho nwere ike ịbụ jiri refill mee ihe ugboro ugboro ka ịchọrọ, ruo mgbe ọ ga -agbaji site n'iji ya eme ihe. Igbe nke ọ bụla gụnyere usoro abụọ iji jupụta ịgba 750ml gị, ugboro abụọ na dị ọnụ ahịa ya na 2,30 XNUMX (3,90 na ịgba).
Na mgbakwunye na ebughi ihe ọ bụla Ecolabel machibidoro (phosphates, EDTA, microplastics, nanosilver, nitros na polycyclic musks ..) Ụdị usoro enweghị sulfate n'ihi na ha nwere ike imebi ihe ndị dị n'ime mmiri. Ihe nhicha ya sitere na akwụkwọ nri yana isi ya bụ otu n'ime iwu Ecolabel kwere. Ihe mejupụtara ya bụ: mmanya Isopropyl, [methyl-2- (methyl-2-methoxyethoxy) ethoxy] propanol, Polyethylene glycols pm 400, C9-11 pareth-8, Aqua, Methoxyisopropanol, mmanya polyvinyl, Parfum, Benzotriazolyl dodecyl p-cresol, Agba
Neletab na -enye gị ụzọ akụ na ụba, dị mma ma na -adigide iji hichaa ụlọ gị ma lekọta nke gị. Ngwa nhicha a na -ahụkarị bụ 98% mmiri. Mkpụrụ ọgwụ neletab ọ bụla anyị na -eji, yabụ, bụ obere karama anyị ga -atụfu ma ọ bụ megharịa. A) Ee ị na-ezere plastik na-eji otu na anwuru ọkụ CO2 n'ihi ibufe ngwaahịa ndị a.
Neletab nwere ngwaahịa atọ na katalọgụ ya: onye na-ehicha ọtụtụ ihe, ihe nhicha windo na igwe ịsa ahụ. A na -ewepụta ha niile n'ụdị mbadamba ma jikọta ya na ngwa nri ndị agbakwunyere. A na-eji ihe ndị na-esonụ emepụta ihe nhicha ọtụtụ: Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Percarbonate, Polyethylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Carbonate, Gluconolactone, C12-18 Ecoxylated Alcohol na Isi.
Iji ha dị mfe, naanị tinye mbadamba nkume ndị ahụ na ịgba nke gị ma ọ bụ nke azụtara n'aka Neletab wee were mmiri mgbata mmiri dị 750 ml jupụta karama ahụ. N'ime ihe na -erughị nkeji atọ onye nhicha gị ga -adị njikere iji. Enwere igbe nke usoro 3, 6 na 9 nwere ọnụ ahịa sitere na € 178-138 kwa ọgwụ.
Bugharịa & saa
Di na nwunye ahụ mgbe Move & Wash chọpụtara na nchacha niile ha jiri n'ụlọ bụ nke kemịkal na mmetọ. Eziokwu na ha kpebiri ịgbanwe ka ha gbachara mbọ ịsacha mkpụrụ osisi Nepalese wee chọpụta na ha nwere ike ịnọchite anya ihe dị mkpa maka ọdịnihu n'ọdịnihu. Mbelata mmetọ ụwa.
Mkpụrụ ịsa ahụ, ntụ ntụ na -asacha ahụ na ntụ ntụ ncha ụfọdụ n'ime ha Bugharịa & Sacha flagship na ngwaahịa ndị ama ama . Ngwaahịa anaghị egbu egbu na nkwakọ ngwaahịa na-adigide nke anyị na-akọwa nkenke n'okpuru:
Ncha efere ntụ ntụ. 100% eke, gburugburu ebe obibi, biodegradable na nchacha hypoallergenic. A na -eji ya na igwe ịsa ahụ site n'itinye teaspoons 2 n'ime ebe a na -asacha ihe ma ọ bụ ozugbo n'ime ọgba. Na -asachapụ ma na -adị nro ma dịkwa irè na obere okpomọkụ. Ike ya dị elu na -emekwa ka ọ zuo oke dị ka igwe na -asa efere igwe yana citric acid yana ihe nhicha elu.
Na-asa mkpụrụ. 100% eke, gburugburu ebe obibi na ihe nhicha biodegradable. Site na asambodo Organic India, ọ bụ ngwaahịa nhicha dị mma, akọwapụtara maka akwa ụmụaka ma ọ bụ ndị nwere nsogbu nfụkasị. Saponin na -eme ka uwe dị nro na -eme ka ọ dị nro na site na otu akpa ị nwere ike kpuchie akwa 240.
Ịsa mkpụrụ ntụ ntụ. Dịka ịsacha mkpụrụ, a na -eji ya asa akwa, na -etinye otu ngaji n'ime igwe nke igwe ịsa ahụ. Na -asachapụ ma na -adị nro ma dịkwa irè na obere okpomọkụ. Ike ya dị elu na -eme ka ọ zuo oke dị ka onye na -asacha efere, na -ehicha ihe ma ọ bụ na -ehicha ebe a na -esi kichin.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịpụta usoro nke gị ma ọ bụ na ị chọghị itinye oge na ha, ngwaahịa ndị a na -adigide na vegan nwere ike bụrụ ezigbo ihe ọzọ na ngwaahịa nhicha ọdịnala. Ị nwere mmasị n'ụdị ngwaahịa a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Ngwa ndị na -adigide Spanish na vegan nhicha
Vitamin B3: Uru ya, nri ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Otu esi amata nwata na -egbu egbu